Alote Myanmar | မြန်မာနိုင်ငံတွင်အလုပ်ရှာပါ
Alote - အလုပ်ရှာ၊ ဒီမှာရ
ဆိုင်အရောင်းစာရေး 98 Jobs
ဆိုင်အရောင်းစာရေး 49 Jobs
အငယ်တန်းစာရင်းကိုင်၊ စာရင်းကိုင် 43 Jobs
စာရေး 36 Jobs
ဝယ်ယူသူဝန်ဆောင်မှုအကူ 27 Jobs
ဘဏ္ဍာရေးအကူ 26 Jobs
ဂိုဒေါင်လုပ်သား 25 Jobs
ငွေကိုင် 24 Jobs
လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှု 24 Jobs
ကြီးကြပ်ရေးမှူး 23 Jobs
ယာဉ်မောင်း 17 Jobs
သန့်ရှင်းရေး 14 Jobs
Heavy Machinery Driver (တာဝါ/မိုဘိုင်းကရိန်း)
Loan Officer (Mawlamyine)
Retail Sales Executive (ကရင်)
ALOTE Mobile App ဖြင့်နေ့စဉ်အလုပ်များကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ App ကို download လုပ်ရန်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သင်၏နောက်အလုပ်တစ်ခုကို Alote App ပေါ်တွင်ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
Alote သည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအလုပ်များကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ရှာတွေ့နိုင်မည့်အထိရောက်ဆုံးအွန်လိုင်းအလုပ်ရှာဖွေမှု mobile application ဖြစ်သည်။ ရာနှင့်ချီသောထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများသည်နေ့စဉ်အလုပ်သစ်များကိုကြော်ငြာလျှက်ရှိသည်။
Android APK ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ
သင်၏မြန်မာဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ၂ မိနစ်အတွင်း ALOTE ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပါ။
သင်၏အလုပ်ရာထူး၊ နေထိုင်ရာ တိုင်းနှင့်မြို့နယ်၊ ပညာရေးအရည်အချင်း၊ ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အလုပ်အတွေ့အကြုံများဖြင့်သင်၏ ALOTE ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့် ALOTE မှ အလုပ်ရှင်များကို သင့်အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါ။
အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုများပိုမိုရရှိရန် ကုမ္ပဏီများကို သင်၏နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့သောအလုပ်အကြောင်းကို အသိပေးလိုက်ပါ။
သင်လုပ်ချင်သောအလုပ်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အမျိုးအစား ၄ ခုအထိရွေးချယ်နိုင်ပြီး ALOTE သည်သင့်အလုပ်ရှာဖွေမှုနှင့်ကိုက်ညီသောသင့်လျော်သောအလုပ်များကိုပြသမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်လျှောက်ချင်သောအလုပ်များကိုရွေးချယ်ပါ၊ သင်၏ ဦးစားပေးအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီသော လက်ရှိခေါ်နေသည့်အလုပ်ရာထူးများနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုချက်များကိုချက်ချင်းရယူလိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် သင်၏ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် (သို့) ID ကဒ်၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ အခြားအလုပ်ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်း များကိုတင်လိုက်ပါ။
သင်၏ ALOTE ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်ရရန်အခွင့်အလမ်းပိုများပါသည်။
Alote.com.mm မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အလုပ်အကိုင်များ
Alote.com.mmမှ အလုပ်သမားများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိအလုပ်အကိုင်များ။
ယာဥ်မောင်း၊ forklift ယာဥ်မောင်း၊ လုံခြုံရေး၊ အဖျော်ဆရာ၊ စားပွဲထိုး၊ စားဖိုမှူး၊ စက်ကိုင်၊ ကရိန်းယာဥ်မောင်း၊ storekeeper ၊ ဟိုတယ်အကူ၊ လျှပ်စစ်မီးဆရာ၊ ရေပိုက်ဆရာ၊ နည်းပညာရှင်၊ ဟိုတယ်ဧည့်ကြို၊ pharmacist၊ အရောင်းစာရေး၊ ငွေကိုင် နှင့် အခြားသောအလုပ်အကိုင်များကိုလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
သင့်အိမ်အနီးနား သို့မဟုတ် ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးရှိ အိမ်နီးချင်းမြို့နယ်များဖြစ်သော - အလုံ၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်၊ ဒဂုံ၊ လှိုင်၊ ကမာရွတ်၊ အမရပူရ၊ ချမ်းမြသာစီ၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် နှင့် အခြားသောနေရာများတွင် အလုပ်ရှာလိုက်ပါ။
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်နှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများအပြင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၊ သိုလှောင်ရုံလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများရှိ အလုပ်အကိုင်များနှင့်အခြားသောအလုပ်အကိုင်များကို Alote.com.mm တွင်ရှာဖွေလိုက်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူကြိုက်များတဲ့ အလုပ်အကိုင်များ
အထွေထွေစက်မှု၊ လက်မှု ကျွမ်းကျင်၊ ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာနှင့်လုပ်သားများ
ကုန်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်သိုလှောင်ရေး၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ
ယာဉ်မောင်း၊ ပစ္စည်းပို့၊ အငှားဆိုင်ကယ်မောင်း
Silver Shine Int'l Co.,Ltd. [SSI]
Su Myat Mingalar Trading Co.,Ltd.
Thinn Shwe Zin Gold & Jewellery